रोल्पामा फेरि अर्कि बालिका माथी भुतले आक्रमण गर्‍यो ! (हेर्नुहोस भिडियो)
नेपालमा पछिल्लो समय भुतको घटना नभएका होईनन, धेरै मानिसलाई आतंकीत पनि बनायो । ललितपुरको एक घरमा त्यस्तै तर्सौने, गमला फाल्ने, टिभी फुटाउने अदृश्य घटना भयो । अन्तत त्यो घटना मानवले नै घटाएको पत्ता लाग्यो । अहिले हामी जसले पनि भुत, पिशाछ, तर्साउने कुराहरुको बिस्वास गर्दैनौ । हामी यस्ता कुराहरुलाई रुढीबादी मान्छौ । तर एउटा यस्तो घटना घटेको छ, जुन थाहा पाउँदा जो कसैलाई लाग्न सक्छ । के यो साच्चै हो । कसैलाई पत्यार नलाग्ने घटना भयो । एक १० बर्षिय बालिकालाई घर भन्दा ५०० मिटर टाढा जङ्गलमा लग्यो । बालिका रुदै, कराउदै बसिन गाउलेहरु खोज्न लागे तर उनिहरुले पत्ता लगाएनन । अर्कै गाउका एक ब्यक्तिले बच्चा काराएको छनि भनेपछी सोही स्थानमा गएर हेर्दा बालिकालाई देखेर ल्याए । तर घटना आखिर के हो भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको छ ।
हेर्नुहोस भिडियो ! (समता टेलिभिजन)